Ukulima kwamakhukhamba emhlabathini ovulekile | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukulima kwamakhukhamba emhlabathini ovulekile
Kungakhathaliseki ukuthi kunzima kangakanani: ukugcina kanjani amazambane ebusika ebhodini?
Amazambane ayingxenye ebalulekile yokudla kwansuku zonke kwemindeni eminingi. Namuhla ungathola eziningi zokupheka ezisebenzisa le mifino. Ngaphezu kwalokho, kwabaningi, lo mkhiqizo uba obalulekile ebusika. Njengoba kunikezwe lokhu, amazambane athengwa futhi agcinwe phakathi nesikhathi sokubandayo. Imifino ihlale idinga ukwelashwa okukhethekile futhi, uma kuziwa kumazambane, kufanele idonsa.
Ikhukhamba: indlela efanele yokukhula
Ngisho nomlimi owaziwa kakhulu, otshale izitshalo ezihlukahlukene esiqhingini sakhe iminyaka engaphezu konyaka, akanakuhluleka ukukhipha imibhede embalwa ngamakhukhamba. Sekuvele kube yisiko - ehlobo sikhulisa lesi sitshalo, siqoqe isithelo, siwubheke emabhange, futhi ebusika siyajabula ukudla ukudla okusemathinini. Abanye abantu bacabanga ukuthi kubalulekile ukutshala noma yimiphi imifino endaweni evulekile, njengokungathi ifomu layo langempela, futhi lena yindlela kuphela yokuthola isivuno esiwusizo kakhulu futhi esihlwabusayo.
Konke mayelana nokudla ukhukhamba ngemuva kokutshala emhlabathini, kunokuba ukhule izitshalo
Ikhukhamba ingenye yemifino efunwa kakhulu, idliwe fresh noma ekheniwe. Amakhekhe kanye nemifucumfucu emanzini - isidlo sokuthokoza sokuqala ematafuleni ethu. Ukuze ukhule ukhukhamba, kufanele uzame futhi unike imifino zonke izakhi ezidingekayo ukuze kuvune isivuno esihle. Inselelo encane: imithetho eyisisekelo yokondla ukhukhamba Ikhukhamba ibhekwa njengesitshalo esingenasisekelo kunawo wonke.
Lapho utshaka ukhukhamba emhlabathini ovulekile, amathiphu abalimi
Ukhukhamba watshalwe cishe wonke umhlali wehlobo. Kodwa-ke, akubona wonke umuntu owaziyo ukutshala nokuthi kufanele abatshale kanjani ukuze bathole isivuno esingcono kakhulu. Futhi ikhukhamba iyimifino ekhishwa yi-whimsical ebeka phambili inani lezimfuneko zokuhlwanyela nokunakekelwa. Ngezinsuku zokuhlwanyela kahle nokunakekelwa okufanele, lesi sitshalo singakhula futhi sithele izithelo kokubili ezindaweni zokugcina izithombo nasemoyeni ovulekile.
Ukuchelela ngokufanele amakhukhamba ensimini
Amakhukhamba akhula endle, kubalulekile ukuhambisana nazo zonke izimo zalolu hlelo futhi uqinisekise ukunakekelwa okufanele. Okubaluleke ngokukhethekile ukufaneleka kokuchelela. Kulesi sihloko sizobe sichaza indlela yokukhipha ukhukhamba ensimini ukuze uthole isivuno esicebile, esiphezulu. Izimo zokukhuka ukhukhamba Ngaphambi kokuba uqale ukutshala isitshalo, kubalulekile ukuzijwayeza ngezimo ezidingekayo ekukhuleni okujwayelekile kwemifino.
Konke mayelana nohlobo lwezinkukhu uMechelen cuckoo Malin: incazelo, izici, izithombe
Uhlobo olukhulu lwezinkukhu olunomuntu ozolile - Umshicileli
Utamatisi "Kumato": incazelo yezinhlobonhlobo zamatamatisi omnyama, izincomo zokukhula